Ramamimampionona Gérard: “Mialoha ny politika sy ny fahefana ny fihavanana” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Mialoha ny politika sy ny fahefana ny fihavanana”
Hetsehina fatratra izay hisian’ny filaminana sy fitoniana amin’izao fiatrehana ny fifidianana izao. Miara-dalana amin’izany ny fihavanana. Maneho ny fijeriny ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), avy amin’ny faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard: “Aoka ho tsapan’ny rehetra fa mialoha ny politika sy ny fahefana ary ny vola ny fihavanana.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Aiza ho aiza ny fampihavanam-pirenena, tsy amin’ny fiatrehana ny fifidianana ihany fa mandavantaona?
Ramamimampionona Gérard (-): Resahina hatrany ny amin’ny fampihavanam-pirenena. Miteny hatrany izahay fa tsy resaka politika fotsiny ny fampihavanana, fa toe-tsaina ifotony. Averiko sy hamafisiko amin’ny olon-drehetra: raha miteny hoe ifotony, ny foto-pisainantsika, ny ao am-pontsika ao, ny any amin’ny fanahintsika any… no tena fototry ny hoe fihavanana. Miitatra eo amin’ny fianakaviana misy ny tena izany, eo amin’ny fiarahamonina, eo amin’ny sehatry ny asa… ahitana taratra izany voalohany.
Mila atomboka izany, ary tsy vitan’ny hoe ao anatin’izao fotoam-pifidianana izao fotsiny. Mety afa-mandray izany vetivety, ohatra, ny raiamandreny: hay tokoa misy fahendrena tokony hananana eto amin’ny firenena! Mba hahitan’izay olona manam-panahy marina, azo anankinan-javatra, azo ianteherana sy itokisana… Any amin’ny sehatra be dia be izany fampihavanana izany.
* Ahoana ny vahoaka ifotony amin’izany?
– Avy tany Analavory aho izao, nihaona tamin’ny filoham-pokontany sy ny olon-drehetra tany. Anisan’ny noresahina tany ny hoe ifotony: ahoana ny halatra mangahazo iray na roa fototra na akoho iray, entina any polisy? Avy eo, lasa raharaham-pitsarana sy kolikoly izany, lasa fahapoteham-piainana. Angaha tsy misy raiamandreny sy olona to teny intsony any anivon’ny fokontany, tsy mandray ny andraikiny ve isika… ? Inona, ohatra, ny atao amin’izay tratran’ny hanoanana, raha izay no antony?
Ho avy izao ny fifidianana, izao no tenenin-dry zareo any ifotony tany: “Milamina izahay aty, tsy misy olana.” Olana any, ady tany sy tsy fandriampahalemana. “Fa rehefa tonga ny mpanao politika, vao mainka mampiady anay”, hoy ry zareo. Aoka àry ho tsapan’ny rehetra fa mialoha ny politika sy ny fahefana ary ny vola ny fihavanana. Tokony hapetraka any an-tsain’ny olona rehetra any izany.
* Iza no tokony hampihavanina, raha vao mainka mampiady ny vahoaka ifotony ny mpanao politika?
– Resaka kely mampihomehy: “Raha ny mpanao politika no manakorontana sy milalao anay. Efa hainay koa izao ny milalao mpanao politika”, hoy ny olona any ifotony tamin’izay diako izay. Olona sivy, ohatra, ny ao an-trano, araka ny fanazavan’ny filoham-pokontany iray: rehefa tonga ny fifidianana, mizara amin’ny kandidà sivy samy hafa izy ireo. “Mba maka izay azonay ihany aloha izahay”, hoy izy ireo. Lasa kilalao ny fifidianana amin’izany, lasa fikaramana. Fotoana fanaparitahana vola ho an’ny kandidà izao; ho an’ny vahoaka, fanangonan-javatra. Izay no ilàna fanabeazana.
Izay, angamba, no anaovana ny Dinam-pifanarahana amin’ny fifidianana, izay efa voalazan’ny lalàna aza ny zavatra sasany fa hamafisina mba ho tsapa sy hampahafantarina bebe kokoa ny olona: tsy fizarana vola na zavatra ny fifidianana. Nefa raha izao no tenenina hoe tsy mahazo mizara vola na zavatra intsony ny kandidà, hilaza ny olona hoe: “Izao vao saika hanangona izahay”.
Lasa mihodinkodina amin’izany ny firenena, nefa tsy maintsy manam-pahasahiana isika mivoaka amin’izany. Eo ny fanabeazana sy ny fanentanana hiarahana amin’ny firaisamonina sivily sy izay sehatra rehetra tokony hanao izany. Mamondrona izany ny CFM mba hoentanina ihany ny vahoaka. Mba tsy himenomenona indray rehefa avy eo… Hiezaka isika mba hisy fiovana anaty, ary ny fiovana amin’izay atao ety ivelany.